ဘာသာတရား & ဝိညာဉ်ရေး ကမျြးစာက
by ဆမ် O'Neal
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ပထမဦးဆုံးစာအုပ်များအတွက် key ကိုအချက်အလက်များနှင့်အဓိကအကြောင်းအရာများပြန်သုံးသပ်ပါ။
ကျမ်းစာထဲမှာပထမဦးဆုံးစာအုပ်အဖြစ်, ကမ်ဘာဦးကမျြးစာကိုတလျှောက်လုံးဖြစ်ပျက်သမျှအဘို့စင်မြင့်သတ်မှတ်။ ထိုအစဉ်ကမ်ဘာဦးကအကောင်းဆုံးကမ္ဘာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ယင်း၏ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအားလုံး 50 အခန်းကြီးစူးစမ်းဖို့အချိန်ယူသောသူတို့အားကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်နောဧရဲ့သေတ္တာအဖြစ်ပုံပြင်များများအတွက်လူသိများသည်။
Author: ဘုရားကျောင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး မောရှသေညျ နီးပါးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာကမ်ဘာဦးကရေးသားသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်ဘာဦး, ထှကျမွောကျရာ, ဝတ်ပြုရာကျမ်း, နံပါတ်များနှင့်တရားဟောရာ - ကမျြးစာကိုကမျြးစာ၏ပထမငါးစာအုပ်တွေများအတွက်မူလတန်းစာရေးဆရာအဖြစ်တဖန်မောရှေအားသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသဘာဝကျပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာအုပ်များမကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် ကျွတ်ကျမ်း , ဒါမှမဟုတ်အဖြစ် "ဟုပညတ္တိကျမ်း။ "
[မှတ်ချက်: ဒီမှာစစ်ဆေး ကျွတ်ကျမ်းများတွင်တစ်ဦးချင်းစီစာအုပ်၏တစ်ဦးထက်ပိုအသေးစိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် နှင့်ကျမ်းစာထဲမှာတစ်ဦးစာပေအမျိုးအစားအဖြစ်နေရာမှ။ ]
3 မောရှေသည် လာ. နှင့်သခင်၌ရှိသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုအပေါင်းတို့နှင့်တရားတို့ကိုလူအသို့ပြောသည်။ ထိုအခါလူအပေါင်းတို့ကို "။ ကျနော်တို့သခင်ဘုရားမှာထားတော်မူသမျှကိုပြုလိမ့်မည်" တစ်ခုတည်းအသံနှင့်တုံ့ပြန်4တဖန်မောရှေသည်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုချရေးသားခဲ့သည်။ သူဟာလာမယ့်နံနက်အစောပိုင်းထတောင်ခြေရင်းမှာဣသရေလအမျိုး၏ 12 နွယ်အဘို့ယဇ်ပလ္လင်နှင့် 12 တိုင်ကို set up ။
ထှကျမွောကျရာ 24: 3-4 (အလေးပေးထည့်ပြီး)
တိုက်ရိုက်အဖြစ်ကျွတ်ကျမ်းကိုရည်ညွှန်းကြောင်းကျမ်းပိုဒ်၏နံပါတ်လည်းရှိပါတယ် "မောရှေ၏စာအုပ်။ " (ဥပမာအားဖြင့်, 1, နှင့် Mark 12:26 နံပါတ် 13 ကိုကြည့်ပါ) ။
ဤရွေ့ကားသံသယအကြီးအကျယ်ကျမ်းမောရှေ၏တစ်သက်တာအပြီးသည်အထိအသုံးပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းနေရာများကိုအမည်များကိုမှကိုးကားဆံ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှချည်ထားသောနေကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တရားဟောရာကျမ်း (တရားဟောရာ 34 ကိုကြည့်ပါ: 1-8) မောရှေ၏သေခြင်းနှင့်သင်္ချိုင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ပါရှိသည် - သူဖွယ်ရှိသည်ကိုယ်တော်တိုင်ရေးထားဘူးအသေးစိတ်ကို။
သို့သော်ဤအချက်အလက်များကမ်ဘာဦးနှင့်ကျွတ်ကျမ်း၏ကျန်၏မူလတန်းစာရေးဆရာအဖြစ်တဖန်မောရှေအားဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်စေပါဘူး။ အဲဒီအစား, မောရှေသည်မောရှေ '' သေသောနောက်ပစ္စည်းကဆက်ပြောသည်တဲ့သူတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအယ်ဒီတာများအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခဲ့သည့်ပစ္စည်း၏ကျယ်ပြန့်အများစုရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းဖွယ်ရှိပါတယ်။
နေ့စွဲ: ကမ်ဘာဦးဖွယ်ရှိ 1450 နှင့် 1400 ဘီစီအကြားရေးသားခဲ့ (အမျိုးမျိုးပညာရှင်များအတိအကျရက်စွဲများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိသည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးကဒီအကွာအဝေးအတွင်းလဲကျ။ )
ကမ်ဘာဦးကဖုံးလွှမ်းအကြောင်းအရာဝဠာ၏ဖန်တီးမှုကနေဂျူးလူမျိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှလမ်းအပေါင်းတို့ကြက်နေစဉ်, အမှန်တကယ်စာသား (မောရှေအားပေးခဲ့သည် ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျော၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ ယောသပ်သည်များအတွက်နေအိမ်ထူထောင် 400 ကျော်နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်) အဲဂုတ်တုပွညျ၌ဘုရားသခင်ရဲ့လူ (ထွက်မြောက်ရာ 12 ကိုကြည့်ပါ: 40-41) ။
နောက်ခံသမိုင်း: အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်ဘာဦးကမျြးကိုခေါ်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမောရှေအားပေးသောပိုကြီးတဲ့ဗျာဒိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တဖန်မောရှေအားမျှမကသူ၏မူရင်းပရိသတ်ကို (အဲဂုတ်တုပွညျမှအအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်) ကိုမစသည်တို့ကိုအာဒံနဲ့ဧဝကအာဗြဟံနှင့်စာရာသည်ယာကုပ်နှင့်ဧသော၏ပုံပြင်များမှမျက်မြင်သက်သေများခဲ့ကြသည်
ထို့ကြောင့်ဘုရားသခငျ့လူမြိုး၏သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်၏မောရှေ၏လုပ်ရပ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လူမြိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအဘို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြင်ဆင်နေ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံနေရာမီးထဲကကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခဲ့, သူတို့ကတိထားရာမြေ၌မိမိတို့အသစ်သောအနာဂတ်စတင်ခဲ့ပြီးမတိုင်မီသူတို့မြို့မှရောက်လာသောဘယ်မှာနားလည်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
သေးငယ် Chunk သို့ကမ်ဘာဦးကမျြး subdivide ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အဓိကလမ်းကညျဘုရားသခငျ၏လူတို့တွင်လူတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတစ်ဦးဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်အတိုင်းဇာတ်ကြောင်းအတွင်းအဓိကဇာတ်ကောင်အတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည် - အာဒံနဲ့ဧဝတို့, ထို့နောက်ရှေ, ထို့နောက်နောဧ, ပြီးတော့အာဗြဟံနှင့်စာရာသည်, ထို့နောက်ဣဇာက်သည်, ထို့နောက်ယာကုပ်, ထို့နောက်ယောသပ်သည်။
သို့သော်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းလမ်းများတပါးထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဒီ၏ ... အကောင့်ဖြစ်ပါသည်" (သို့မဟုတ် "အဲဒီ၏ ... အစဉ်အဆက်ရှိပါတယ်") ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာထားသောစာပိုဒ်တိုများကမ္ဘာဦးကျမ်းတစ်လျှောက်လုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲနှင့်စာအုပ်များအတွက်သဘာဝအကြမ်းဖျင်းဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမျြးစာကိုပညာရှင်များဆိုလိုတာကဟီဘရူးသက်တမ်း toledoth, ဤသင်းဖွဲ့ကိုရည်ညွှန်း "သားစဉ်မြေးဆက်။ " ဤတွင်ပထမဦးဆုံးသာဓကဖြစ်ပါသည်:
4 ဤသည်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးနှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူတို့က, နေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည့်အခါမိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတပြင်အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာဦး 2: 4
ကမ်ဘာဦးကမျြးစာ၌တစ်ဦးချင်းစီ toledoth အလားတူပုံစံအောက်ပါအတိုင်း။ ပထမဦးစွာထပ်ခါတလဲလဲထားသောစာပိုဒ်တိုများသည့်ဇာတ်ကြောင်းအတွက်အသစ်တခုအပိုင်းကိုကြေညာ "ဒီ၏အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်" ။ ထို့နောက်အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်အမည်ရှိအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဖြင့်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူ၏ခဲ့ရာရှင်းပြပါ။
ဥပမာအားဖြင့်, ပထမဦးဆုံး toledoth (အထက်) လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖြစ်သည့် "မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး," မှထုတ်ဆောင်ခဲ့သညျအဘယျသို့ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာဦး၏ဖွင့်လှစ်အခန်းကြီးအာဒံ, ဧဝ, နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစု၏ပထမဦးဆုံးအသီးအစောဆုံး interaction ကမှစာဖတ်သူကိုမိတ်ဆက်ပေး။
ဤတွင်ကမ်ဘာဦးကမျြးကနေအဓိက toledoths သို့မဟုတ်ကဏ္ဍများနေသောခေါင်းစဉ်:
2: 4-4: 26 လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တည်းဟူသောထုတ်လုပ်သောအရာကိုကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုပြောပြပါ။
5: 1-6: 8 အာဒံကိုထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ဤအပိုင်းကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်လုပ်ဖို့ရှာသောသူတို့သည် (အာဒံကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကို), နှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုငြင်းပယ်ရန်ရှာသောသူတို့သည်အကြားနက်ရှိုင်းပဋိပက္ခဖော်ပြသည်။
6: 9-9: 29 နောဧသည်ထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ဤရွေ့ကားအခန်းကြီးနောဧရဲ့လိုင်းဤလောက၏အပြစ်နှင့်ကင်းရပ်တည်ပုံကိုပြသနေသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်မသိနိုင်ပေမယ့်နောဧနှင့်သူ၏မိသားစုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေကြသည်။
10: 1-11: နောဧရဲ့သားထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြ9။ ဤအပိုင်းကိုဘုရားသခင်နှင့်ပုနျကနျတှငျနထေိုငျဖို့ရွေးချယ်သောသူတို့အစေခံရန်ရှာသောသူတို့သည်အကြားဆက်လက်စစ်ပြသထားတယ်။ Babel များ၏မျှော်စင်ဒီဇာတ်ကြောင်းအတွက်အဓိကအလေးပေးသည်။
11: 10-11: 26 ကျောဟီးဘရူးလူမျိုး၏မူလဖို့အာရုံကိုဆောင်တတ်၏သောရှေမထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။
11: 27-25: 11 တေရထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ဤရွေ့ကားအခန်းကြီးအဓိကအားဟဗွေဲ၏အဘဖြစ်၏သူသည်အာဗြဟံ, ၏ဇာတ်လမ်းပြောပြပါ။
25: 12-25: 18 ဣရှမေလကိုထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်ခေတ္တအာဗြဟံ၏တရားမဝင်သားနဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ရန်သူများကိုဖွစျလာသူလူမျိုးအများတို့၏အဘသူ, ဣရှမေလ၏သားစဉ်မြေးဆက်လေ့လာစူးစမ်း။
25: 19-35: 29 ဣဇာက်သည်ထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ဣဇာက်သည်အာဗြဟံရဲ့သားနဲ့ယာကုပ်အမျိုး၏အဘဖြစ်၏။ ဤအခန်းကြီးများအတွက်ဇာတ်ကြောင်းအတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်သောသူသည်, သို့သော်, ယာကုပ်အမျိုးကိုပါပဲ။
36: 1-37: 1 ဧသောထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ယာကုပ်အမျိုးကိုအာဗြဟံ၏ line ကိုဆက်လက်နေစဉ်, ဧသော၏သားစဉ်မြေးဆက်ကွာဘုရားသခင်ထံမှဆွဲခြင်းနှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အဘို့အရန်တွေ့သည်အခြားအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။
37: 2-50: 26 ယာကုပ်အမျိုးကိုထုတ်လုပ်သောအရာကိုပြောပြပါ။ ဤသည်ဟေဗြဲလူတမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲဂုတ္တုပြည်၌အခြေချဘယ်လိုကရှင်းပြသည်သောယောသပ်၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစကားလုံးက "ကမ္ဘာဦးကျမ်း" ", ဇစ်မြစ်" ကိုဆိုလိုသည်နှင့်တကယ်ဤစာအုပ်၏အဓိကဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်ဘာဦးကစာသားအရာအားလုံးမှားသွားတယ်, ဘယ်လိုသညျဘုရားသခငျကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရာရွေးနှုတ်တော်မူရန်သူ၏အစီအစဉ်ကိုစတင်ဘယ်လောက်, အရာအားလုံးဖြစ်လျက်ရှိသို့ကြွတော်မူပုံကိုပြောပြခြင်းဖြင့်သမ်မာကမျြး၏ကျန်များအတွက်ဇာတ်စင်သတ်မှတ်။
ကြောင်းပိုကြီးတဲ့ဇာတ်ကြောင်းအတွင်းမှာပဲပိုကောင်းဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်ထောက်ပြသင့်ကြောင်းအတော်ကြာစိတ်ဝင်စားဖို့ themes များရှိပါသည်။
မြွေ၏အမြိုးသားအကျမ်းပိုဒ်သညျဘုရားသခငျ၏သား။ အာဒံနဲ့ဧဝကအပြစ်တရားသို့ကျဆင်းထိုခဏခြင်းတွင်အပြီး, ဘုရားသခင်ကဧဝအမြိုးသားတို့သည်အစဉ်အမြဲ (အောက်တွင်ကမ္ဘာဦး 3:15 ကြည့်ပါ) မြွေကိုအမြိုးသားတို့နှင့်အတူစစ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့သည်။ ဒီအမြိုးသမီးမြားမြွေကိုကြောက်လိမ့်မယ်မဆိုလိုခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ဒီဘုရားသခင်၏အလိုတော်လုပ်ဖို့ကိုရှေးခယျြသောသူတို့အား (အာဒံနဲ့ဧဝတို့၏သား) နှင့်ဘုရားသခငျသညျငွငျးပယျနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြစ် (မြွေ၏အမြိုးသားအ) ကိုလိုက်နာဖို့ရွေးချယ်သောသူတို့အကြားကပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာပဋိပက္ခကမ်ဘာဦးကမျြးတလျှောက်လုံးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပြီး, သမ်မာကမျြး၏ကျန်တစ်လျှောက်လုံးအဖြစ်ကောင်းစွာ။ ဘုရားသခငျသညျနောကျလိုကျဖို့ရှေးခယျြခဲ့သူများသည်အဆက်မပြတ်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သောသူတို့သည်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ရုန်းကန်နောက်ဆုံးမှာသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏ပြီးပြည့်စုံသောကလေးအပွစျရှိလူတို့အသတ်ခံအခါပြေလည်ခဲ့ - သေးကြောင်းပေုံရှုံးနိမ့်အတွက်သူသည်မြွေ၏အောင်ပွဲလုံခြုံကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလူအားလုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်အဘို့အဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အာဗြဟံနှင့်ဣသရလေနှငျ့ဘုရားသခငျပဋိညာဉ်တရားကို။ ကမ္ဘာဦး 12 နှင့်အတူစတင်, ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ရွေးချယ်သောလူများအကြားဆက်ဆံရေးခဲကြောင်း, အာဗြဟံ (ထို့နောက်အာဗြံသည်) ဖြင့်ပဋိညာဉ်တရား၏စီးရီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား, ပဋိညာဉ်တရားကိုသာသို့သော်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အကြိုးခံစားဖို့ရည်ရွယ်မခံခဲ့ရပါ။ ကမ်ဘာဦး 12:3(အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိမိလူအာဗြဟံရဲ့အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်တဦးမှတဆင့် "လူအားလုံး" ကိုကယျတငျတျောမူခွငျးကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်သကဲ့သို့ဘုရားသခင်၏အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာအစ်စရွေးချယ်ရာတွင်ကြောင်းစေသည်။ ဓမ်မဟောငျးကမျြး၏ကျန်သူ့လူတို့နှင့်အတူဘုရားသခငျ၏တကြားဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြထားတယ်, နှင့်သောပဋိညာဉ်တရားနောက်ဆုံးမှာဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ယရှေုအားဖွငျ့ပွညျ့စုံခဲ့။
ဘုရားသခငျသညျဣသရနှင့်အတူပဋိညာဉ်တရားကိုကြားဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူ့ကတိတော်များကိုဖြည့်ဆည်း။ အာဗြဟံနှင့်ညျဘုရားသခငျ၏ပဋိညာဉ်တရားကို (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 12 ကိုကြည့်ပါ: 1-3) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, သူအရာသုံးခုကတိထားတော်: 1) ဘုရားသခဤလူမြိုးအိမ်ပြန်မခေါ်မယ့်ကတိထားတော်ပြည်ကိုငါပေးပြီမည်ဖြစ်ကြောင်း 2) အကြောင်း, လူမြိုးကွီးသို့အာဗြဟံရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုဖွင့်မယ်လို့ နှင့် 3) ဘုရားသခငျသညျမွကွေီးပျေါမှာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူရန်ဤလူမျိုးကိုအသုံးပွုရလိမ့်မယ်လို့။
ကမ်ဘာဦး၏ဇာတ်ကြောင်းတသမတ်တည်းကြောင်းဂတိတော်ခြိမ်းခြောက်မှုများပြသထားတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အာဗြဟံ၏ဇနီးညံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူဖခင်တစ်ဦးကြီးသောလူမျိုးလိုတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမယ့်ဂတိတော်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအအကျပ်အတည်းအချိန်လေး၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ဘုရားသခင်အတားအဆီးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သူကတိထားတော်အဘယ်အရာကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်လုပ်ပါ။ ဒါဟာစာအုပ်တစ်လျှောက်လုံးဇာတ်လမ်းလိုင်းများအများဆုံးမောင်းကယ်တင်ခြင်းဤအကျပ်အတည်းများနှင့်အချိန်လေးပါပဲ။
14 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြွေကို said:
သင်သည်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်များထက် ပို. ကျိန်ခြင်းကိုခံရ၏
ကမ္ဘာဦး 3: 14-15
သင်၏မြေထံမှထွက် သွား. ,
ကမ်ဘာဦး 12: 1-3
24 ယာကုပ်အမျိုးကိုတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောနှင့်လူတမိုဃ်းလင်းသည်အထိသူ့ကိုနှင့်ပြိုင်ခဲ့သည်။ 25 ယောက်ျားသည်သူ့ကိုအနိုင်ယူနိုင်ဘူးမြင်လျှင်သူတို့ပြိုင်နဲ့သူ့တင်ပါးဆုံရိုးအဆစ်လွဲအဖြစ်, သူယာကုပ်၏တင်ပါးဆုံရိုး socket လုပ်ကြံလေ၏။ 26 ထိုအခါသူက "ဒါဟာမိုဃ်းလင်းသည်ငါ့ကိုသွားကြကုန်အံ့။ " ယာကုပ်အားဆိုပါတယ်
သို့သော်ယာကုပ်အမျိုးကို "ကျွန်မသင်တို့သည်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသရွေ့သင်ဟာသွားကြကုန်အံ့မည်မဟုတ်။ " ဟုပြောသည်
27 "သင်၏နာမကိုအမှီကဘာလဲ?" ထိုလူကိုမေးခဲ့တယ်။
28 "သင်၏နာမကိုအမှီမရှိတော့သည်ယာကုပ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ "သင်ဘုရားသခင်နှင့်အတူလူနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ကြကြောင့်ဣသရေလဖြစ်လိမ့်မည်။ "
29 ထိုအခါယာကုပ်သည် "ငါ့ကိုသင်၏အမည်ကိုပြောပါ။ " ကိုယ်တော်ဟုမေး
သို့သော်သူက "အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမှီမမေးကြဘူး?" ဖြေကြားတော်မူအဲဒီမှာသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။
အသက် 30 ယာကုပ်အမျိုးကိုထို့နောက်ထိုအရပ်ကိုပေနွေ, အမည်ရှိ "ကျွန်မမျက်နှာမှဘုရားသခငျသညျမကျြနှာကိုမွငျရကွပွီ" ဟုသူကကဆိုသည် "နှင့်ငါပေးပို့ပြီးပါပြီ။ "
ကမ်ဘာဦး 32: 24-30
မာကု၏အဆိုအရအဆိုပါခရစ်ဝင်ကျမ်း, အခန်း 6
တမန်တော် '' Creed
ယရှေုသညျ (35-45 မာကု 10) ကိုယာကုပျနှငျ့ယောဟနျ၏တောင်းဆိုမှု
ထိပ်တန်းသမ်မာကမျြးဆော့ဝဲ Programs ကို
စာလုံးရွေးချယ်မှုအရေးကြီး Is ဒါကစုံစမ်းဒါက 20 အရိပ်လက္ခဏာများ
နယူးကားရှေ့မှနျ Wiper ကို Install လုပ်နည်း
ယင်းပုတီး၏ဘုန်း Mystery အပေါ်ဘာဝနာ
တစ်လီယိုက Man ၏နှလုံးအနိုင်ရမည်ဟုလုပ်နည်း
Hybrid ကိုကားမေးခွန်း: ငါ့အကားချို့ယွင်းချက်လား?
ကဒ် Tricks: ငါသင့်စိတ်ကိုဖတ်ပါနိုငျ!
အကြောင်းရောဘတ် Frost ကရဲ့ "တစ်ဦးနှင်းဖုံးညနေပိုင်းအပေါ်ဝုဒ်အားဖြင့်ရပ်ဆိုင်းလိုက်"
တောင်တက်သမား4ပွတ်တိုက်မှုထုံး
ဂျာမန် Misnomers, ဒဏ္ဍာရီများနှင့်အမှား: အဘယျသို့စစ်မှန်သောရဲ့အဘယ်အရာကိုမလား
'' အဆိုပါမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း '၌ Caliban ရဲ့က Character ကိုနားလည်ခြင်း
နှေးရည်မှန်းချက်များချိန်ညှိခြင်းအတွက် Universal နှင့် Diagnostic မျက်နှာပြင်အသုံးပြုခြင်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ 1948 အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသမိုင်း
Ole Kirk က Christiansen နှင့် Lego ၏သမိုင်း
အဘယ်အရာကို @ # $% &! တစ်ဦး Grawlix လား?
ရယ်စရာ Valentine Day ကို Quotes
အဓိပ္ပာယ်နှင့် Explication ၏ဥပမာ (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ)